Filoham-pirenena : Nitondra vahaolana maharitra ho an’ny angovo -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloham-pirenena : Nitondra vahaolana maharitra ho an’ny angovo
18/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny olan’ny angovo no noresahin’ny Filoham-pirenena, ary efa niresaka ihany koa izy ny fotoam-bita fahefatra mikasika ny JIRAMA. Ankehitriny aza dia mitohy hatrany ny ezaka izay tanterahin’ny fitondram-panjakana amin’ny fandrakofana herinaratra manerana an’i Madagasikara, nambaran’ny filoha mihitsy aza fa io ezaka io no anisan’ny ahatadiavan’ ny rehetra azy any aoriana any, toa ny efa nolazainy tany Belobaka. Mbola mila ezaka tokoa mantsy raha ny lafin’ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara, ka anisan’ny mbola hitadiavan’ny fitondrana famatsiana, na eto an-toerana, na ihany koa any ivelany “tsy mitsahatra aho mitady vahaolana, na eto an-toerana, na any ivelany mitady mpampiasa vola sy mpiara-miombon’antoka amin’ny famokarana herinaratra” hoy hatrany ny filoha. Anisan’ny efa ezaka natao ihany koa hoy ny filoha ny mikasika ny herinaratra azo avy amin’ny masoandro “tombontsoa lehibe ho antsika ihany koa izao satria efa midina izao ny fampiasam-bola amin’ny fanodinana herinaratra azo avy amin’ny masoandro, ary mitombo be ihany koa ny fikarohana mikasika izany’’. Manoloana io ezaka io dia nilaza ny filoham-pirenena nandritra ny fotoam-bita, fa lafo ny herinaratra izay taritina amin’ny tariby, satria midadasika ny tanàna sady lavitra ihany koa, izay antony hitadiavana vahaolana ahafahana mampiasa ny angovo azo avy amin’ny masoandro, na ihany koa ny toho-drano kely.
Efa hita ato ho ato sahady ihany koa ny vokatra izay ho azo avy amin’ny angovo hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina “ambarako aminareo fa hiroso tsy ho ela isika amin’ny fanomezana herinaratra amin’ny alalan’ ny masoandro, tanàna maro ary mety ho isan-tokantrano mihitsy aza ‘’ hoy ny Filoha. Fa misy ihany koa ny antontan’isa izay notanisain’ny filoham-pirenena mikasika io lafin’ny famatsiana herinaratra io “fantantsika ve fa ny 94 % any ambanivohitra dia mitakaizina amin’ny haizina satria ny 6 % monja manana jiro nandritra izay taona maro izay, 15 % ny malagasy no misitraka herinaratra amin’ny ankapobeny , tsy manana daholo, na ny an-tanàn-dehibe aza , ary ireo no nitaraina amin’ny delestazy teo aloha . Any amin’ ny taona 2030 any ho any no vinavinaina hahazo jiro ny 30% any ambanivohitra raha ny programa niarahana amin’ ny firenena mikambana’’ hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Na izany aza hoy ny filoham-pirenena dia ho hafainganana ny asa, ary ezahina ny ahazoan’ny rehetra izany herinaratra izany.
Ankehitriny ihany koa dia efa misy ny ezaka amin’ny fampitomboana ny tanjaky ny foibe famokarana herinaratra ho an’ny tanàn-dehibe rehetra , niampy 60 megawatt izany farany teo eto Antananarivo sy ny manodidina. Menaka mavesatra no ampiasaina amin’izany, izay hialana amin’ny fampiasana gasoil, hiala amin’ny sarany izay mampitombo ny fatiantoaka, satria ny gasoil dia avo roa heny ny vidiny. Ankoatra izay dia ezaka amin’ny fanamboarana ny simba hialana amin’ ny mety ho fahatapahan’ny herinaratra. Anisan’ny manana soritr’asa mazava ny ADER, izay manana soritr’asa mazava ho an’ ny any ambanivohitra, efa mandeha rahateo ny tetikasa amin’ireo faritra maro araka ny fanazavana izay nomen’ny filoha, ka mponina hatrany amin’ ny iray hetsy no efa mahazo tombony amin’ izany. Ny fiaraha-miasa amin’ ny power afrika hiarahana amin’ny amerikanina ihany koa, izay efa miparitaka any amin’ ny tanàna zato, dia efa mandeha amin’ izao fotoana izao, ary tokantrano hatrany amin’arivony no nahazo tombony amin’ izany. Nanamarika moa ny filoham-pirenena fa tsy misy volan’ ny fanjakana mivoaka amin’ ireo tetikasa ireo fa dia noho ny fiaraha-miasa amin’ ireo mpampiasa vola avokoa. Ohatra no entin’ ny filoha amin’ izay fiaraha-miasa izay, izao ny tao Mahitsy izay nahazoana herinaratra hatrany amin’ ny 22 megawatt, izay niarahana tamin’ ny orinasa Italianina, Ny tao Anjozorobe izay niampy 60 kilowatt izay tetikasa niarahana tamin’ ny ADER. Mba ahafahana mahazo ny famatsiana herinaratra sahaza, dia tsy maintsy misy ihany koa ny lalàna miaraka amin’izany , nambaran’ny filoha fa “ tsy maintsy ny lalàna izay hifehezana izany, ka natolotra ny parlemantan’ ny lalàna miaraka amin’ izany, no omena antoka ihany koa ny mpampiasa vola ahazoan’ izy ireo antoka, satria vola be ihany koa no ampiasain’ izy ireo amin’ izany’’ hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.